Diyaaradda United Airlines: Diyaaradda Korontada ayaa la qorsheeyay inay Duuliso 2026
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaradda United Airlines: Diyaaradda Korontada ayaa la qorsheeyay inay Duuliso 2026
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Wadada Aerospace waxay soosaaraysaa diyaaradda ES-19, oo ah 19-kursi oo koronto leh awoodna u leh inay ku duusho macaamiisha illaa 250 mayl kahor dhamaadka tobankan sano.
Diyaarad koronto ayaa duulimaad ku tagi doonta heshiisyo cusub oo ay la gashay United Airlines Ventures, Breakthrough Energy Ventures, Mesa Airlines iyo Heart Aerospace.
Shirkadda diyaaradaha ee United Airlines ayaa saxiixday heshiis ay kula soo wareegeyso 100 diyaaradood oo ah nooca loo yaqaan 'Aerospace' ee loo yaqaan 'ES-19', oo ah 19-kursi diyaarad koronto leh oo awood u leh in ay dib u dhigto safarka diyaaradaha gobolka.
Shirkadda United Express ee la shaqeysa Mesa Airlines ayaa sidoo kale saxiixday heshiis ay ku dooneyso 100 ka mid ah diyaaradaha korontada ku shaqeeya.
Shirkadda Diyaaradaha ee United Airlines Ventures (UAV) ayaa maanta shaacisay, iyada oo ay weheliso Breakthrough Energy Ventures (BEV) iyo Diyaaradda Mesa, wuxuu maalgashi ku sameeyay bilowga diyaaradaha korontada ku shaqeeya ee 'Heart Aerospace'. Wadnaha Aerospace ayaa soo saareysa diyaaradda ES-19, oo ah 19-kursi oo koronto leh oo awood u leh inay ku duusho macaamiisha illaa 250 mayl ka hor dhammaadka tobankan sano. Maalgashiga UAV ka sokow, shirkadda diyaaradaha ee United Airlines waxay si shuruud leh ku ogolaatay inay iibsato 100 diyaaradood oo loo yaqaan 'ES-19', marka ay diyaaradu buuxiso shuruudaha amniga, ganacsiga iyo howlaha United Mesa Airlines, oo ah lamaanaha istiraatiijiga ah ee United ee keenista diyaaradaha korontada ku shaqeeya adeegga ganacsiga, ayaa sidoo kale ogolaatay in lagu daro 100 diyaaradood oo nooca ES-19 ah, iyada oo lagu xiray shuruudo la mid ah.
UAV waxay dhiseysaa faylalka shirkado diirada saaraya fikradaha hal abuurka waara isla markaana abuuraya tikniyoolajiyada iyo waxsoosaarka lagama maarmaanka u ah dhisida duulimaad dhexdhexaad ah oo kaarboon ah iyo gaarista himilooyinka qiiqa hawo-ka-saafiga ah ee United. Heshiiskan cusub, United waxay sii xoojineysaa ballanqaadkeeda geesinimada leh ee lagu yareynayo qiiqa gaaska lagu sii daayo 100% illaa 2050 iyada oo aan lagu tiirsanaan waxyaabaha caadiga ah ee kaarboonka, iyo sidoo kale in la suurogeliyo koritaanka Wadnaha Aerospace iyo ka qeyb qaadashada horumarinta diyaaradda yareyn doonta qiiqa gaaska lagu sii daayo. ka duulaya.
“Breakthrough Energy Ventures waa codka hogaaminaya maalgashadayaasha taageeraya abuurista tikniyoolajiyadda tamarta nadiifka ah. Waxaan la wadaagnaa aragtidooda ah inaan dhisno shirkado leh awood dhab ah oo wax ka badali karta sida warshadaha ay u shaqeeyaan, marka aan eegno, taasi waxay la micno tahay maalgashiga shirkadaha sida Heart Aerospace oo soo saaraya diyaarad koronto oo macquul ah, ”ayuu yiri Michael Leskinen, Madaxweyne ku xigeenka United Corp. Xiriirka Horumarinta & Maalgashadayaasha, iyo sidoo kale Madaxweynaha UAV. “Waxaan garwaaqsannahay in macaamiisha ay doonayaan xitaa xitaa lahaansho badan oo ku saabsan raadkooda qiiqa kaarboonka u gaarka ah. Waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno Mesa Air Group si aan ugu keenno macaamiisheen diyaarado koronto koronto kahoreeya diyaaraddaha kale ee Mareykanka. Agaasimihii Mesa ee mudada dheer soo shaqeynayey, Jonathan Ornstein wuxuu muujiyey hogaamin aragti dheer oo ku saabsan duulimaadka ku shaqeeya korantada. ”
UAV iyo BEV waxay ka mid yihiin maalgashadayaashii ugu horreeyay ee Wadnaha Aerospace, iyagoo muujinaya kalsooni ku aaddan naqshadeynta Wadnaha iyo abuurista suurtagalnimada Qalbi si dhakhso leh loola socdo hordhaca ES-19 ee suuqa horaantii 2026.
Duulistu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqaalaheena adduunka. Isla mar ahaantaana, waa isha ugu weyn ee qiiqa kaarboonku sii daayo waana mid ka mid ah qaybaha ugu adag ee la doonayo in la sumeeyo shidaalka. “Waxaan rumeysanahay in diyaaradaha korontada ku shaqeeya ay noqon karto mid isbeddelaysa si loo yareeyo qiiqa wasakheysan ee warshadaha, ayna awood u siiso qiime jaban, xasilloon oo nadiif ah oo socdaal goboleed oo ballaaran. Kooxda aragtida wadnaha waxay soosaarayaan diyaarad hareeraheeda tikniyoolajiyadda korantada ee korantada leh taasoo u oggolaan doonta shirkadaha duulimaadyada inay ku shaqeeyaan qiimo ka yar qiimaha maanta waxayna leeyihiin awood ay wax uga beddelaan habka aan duulimaadyada u sameyno. ”